Saraakiisha Jubbaland oo sheegay 15 Shabaab inay ku dileen dagaal ka dhacay Jubbada hoose – STAR FM SOMALIA
Ku dhawaad 15 qof ayaa ku dhintay kadib dagaal ku dhex-maray Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan maamul-ka Jubbaland duleedka Kismaayo.
Afhayeenka Hay’adaha ammaanka Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud (Carab) oo la hadlay Warbaahinta waxa uu sheegay ciidamada Jubbaland dagaalkii ay la galeen Shabaab inay ka soo hooyen guulo waaweyn.
Deeganada dagaalka uu ka dhacay ayaa kala ahaa Janay-Abdale iyo Ber-xaano oo 60 KM u jirta galbeedka Kismaayo, Maamulka Jubbaland waxaa uu sidoo kale sheegayaa in ay gacanta ku hayaan dhamaan goobihii lagu dagaalamay.
Afhayeenka Hay’adaha ammaanka Jubbaland wuxuu sheegay inaysan ka hari doonin Shabaab ilaa ay ka soo qaadaan sida uu yiri xoolihii ay ka dhaceen dadka shacabka ah.
“Ciidanka Jubbaland waajibaad ayaa saaran waajibkooda ayeey guteen, Janaay Cabdalla waxaan ku dilnay 7 nin, Beerxaani waxaan ku dilnay 8 Xoolihiina waan daba joognaa, ilaa aan ka soo dhicino xoolahaasi dagaalka ma istaagi doono.” Ayuu yiri Afhayeenka Ciidanka Jubbaland.
Al Shabaab ilaa hada kama aysan hadlin dagaalkaan ka dhacay deeganada ku xeeran Magaalada Kismaayo iyo eedeymaha kala duwan ee loo jeediyay.
Xoogaga Shabaab ayaa inta badan lagu eedeeyaa dadka inay ka qaadaan Xoolaha, waa kuwa diida inay bixiyaan Zakawaadka.
Wararkii ugu dambeeyay ee shirka Madasha Wada-tashiga qaran